Hira gasy makotrokotroka : Hitohy eny amin’ny tsenan’Anosibe -
AccueilVaovao SamihafaHira gasy makotrokotroka : Hitohy eny amin’ny tsenan’Anosibe
Miditra amin’ny andro faharoa. Taorian’ny fanokafana tetsy amin’ny kianjan’Ambohijatovo, dia hitohy eny amin’ny tsenan’Anosibe ny andiany faha-9 amin’ny fifaninanana hira gasy makotrokotroka. Ny alahady ho avy izao, dia hifandona amin’ireo singa mandrafitra ny hira gasy ny tarika Ramilison Besigara zokiny sy ny tarika Ramilison Tsimakalagy Arivonimamo.
Raha samy naneho ny talentany avy ny tarika Rafarahasimanga Georgine Ambohimandroso sy ny tarika Ramilison Besigara Fenoarivo ny alahady teo, dia tsy ho latsa-danja amin’izany ny fampiderana fahaizana sy talenta ataon’ny tarika roa tonta ny alahady izao.
Toa ny tamin’ny andiany teo aloha, dia entina hitsarana ireto mpihira gasy ireto ny fahaizany manentana ny mpijery hitehaka amin’ny alalan’ny tononkira sy ny fomba fandihy. Misy dingana samihafa ao amin’ny hira gasy izay hitsarana azy ireo ihany koa dia ny kabary, ny zanan-kira ary ny fihetsika sy ny fandihy.